Menu အစုံအလင်ရရှိနိုင်ပြီး အဝစားနိုင်မယ့် ရန်ကုန်အကင်ဆိုင် – FoodiesNavi
အဝစားဖို့အတွက် Ready နေပြီလား??? ဒါဆိုရင်တော့ Hot Pot & BBQ အရသာအစုံစုံကို ရှယ်အဝစားနိုင်မယ့် ရန်ကုန်အကင်ဆိုင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အကင်ဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ နေ့စဉ် နေ့လည်စာစားချိန် နေ့လည် (၁၁) နာရီကနေ ညနေ (၃) နာရီအထိဆိုရင်တော့ “ ၅၉၅၀ကျပ်”သာ ကျသင့်ပြီး (၂) နာရီအတွင်းမှာ သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညစာစားချိန် ညနေ (၄) နာရီကနေ ည (၁၀) နာရီခွဲအထိကိုတော့ အချိန်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ စျေးနှုန်းကတော့ “၉၈၀၀” ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မစားနိုင်လို့ ပိုလျှံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Gram နဲ့တွက်ချက်ပြီးပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ … မိသားစုအတူတူ သွားရောက်စားသုံးလိုသူတွေ အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့လိုက် စုဝေးပြီးစားသုံးလိုသူတွေ အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်အကင်ဆိုင်ရဲ့ လိပ်စာလေးတွေကတော့–
1. Insein Branch–> On Insein Road, Near ThanLan Bus-stop, Opposite of YUFC Football Stadium 2.
2.Branch 2/25 Lay Htaunt Kan Road, Thu Mingalar Housing (Near Junction Zawaza, Thingankyun ,Yangon)
ရန်ကုန်အကင်ဆိုင်မှာဆိုရင် ကြက်အချို ၊ ကြက်အစပ် ၊ ကြက်အတောင်ပံ ၊ ဝက်သုံးထပ်သား ၊ ဝက်ဂုတ်သားကင် ၊ ဝက်အချို/အစပ် ၊ ဝက်လျှာ ၊ ဝက်/ကြက်သားပြား ၊ အမဲသား ၊ ပုဇွန် ၊ ဂဏန်း ၊ ပြည်ကြီးငါး ၊ ငါးခဲပတ် ၊ ကြက်/ဝက်အူချောင်း စတဲ့ အသားအရသာအစုံစုံ ကို စိတ်ကြိုက်ယူဆောင်ပြီး ကိုယ်ထိုင်မယ့် Table မှာတင် စိတ်တိုင်းကျ ကင်ပြီး စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အနေနဲ့ကတော့ ပြောင်းဖူး ၊ ရုံးပတီသီး ၊ ဆလတ်ရွက်စတာတွေ ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Fast Foods အနေနဲ့ကတော့ အာလူးပြားကြော် ၊ ခေါက်ဆွဲကြော် ၊ ထမင်းကြော် စသဖြင့် နေ့စဉ် အလှည့်ကျ Fast Foods တွေကို သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အအီပြေ အအေးအနေနဲ့ကတော့ သံပုရာရည် ၊ ဇီးဖျော်ရည် စသဖြင့် နေ့စဉ် အလှည့်ကျ အအေးတွေကို သောက်သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုတည်းဖို့အတွက်ကတော့ ဖရဲသီး ၊ သခွားမွှေးသီး စတာတွေအပြင် ချောကလက်ရေခဲမုန့်၊ စတော်ဘယ်ရီရေခဲမုန့် နဲ့ နို့ရေခဲမုန့်တွေကို သုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ….. ဒီလောက်တောင် အရသာကောင်း Menu များတဲ့ ရန်ကုန်အကင်ဆိုင်ကို သွားဖို့ Ready ဖြစ်နေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာ ဆိုင်ခွဲကို အပြေးလေးသွားပြီး အဝစား Hot Pot & BBQ ကို သုံးဆောင်လိုက်ကြရအောင်နော်။
Image Source : www.facebook.com/rangoongrill&chill
In Restaurant Guides Tagged BBQ, Hot pot Leaveacomment